Taphattoonni Arsenaal saamtotaan doorsifaman 'nagaadha' - BBC News Afaan Oromoo
Taphattoonni Arsenaal saamtotaan doorsifaman 'nagaadha'
Image copyright @seadk6
Goodayyaa suuraa Siyaad Kolaasinaachiifi Mesuut Oziil yaalii saamichaa isaan qunnamen hin miidhamne
Taphataan Arsenaal Siyaad Kolaasinaach gaafa Kamisaa magaalaa Landanitti osoo Mesuut Ozilii waliin jiru yaaliin saamichaa irratti raawwatus miidhana nurra gahe hin jiru jedhe.
Taphattoonni Arsenaal Mesuut Oziliifi Si'aad Kolasinaach garee saamtotaan adamsamanii danqamanii turan.
Akka viidiyoon waraabamee toora intarneetiirratti gadi dhiifame tokko agarsiisutti Kolasinaach osoo saamtota isa miidhuuf yaalan kana ofirraa ittisuu mul'ateera.
Taphattoonni bebbeekamoo Piriimiyeer Liigii Inglizii keessa taphatan kunneen lamaan daandii Landan irra deemaa wayita jiran ture kan kashalabboonni hidhannoo qaban gareedhaan ar'ianii qabuuf itti fiigan.
Taphataa arjaa Masirii guddaa leellifame
Haleellaa masjiidarra ga'een namoonni 11 miidhaman
Kilabiin Arsenaal taphattoonni isaa lamaan, Mesuut Oziliifi Si'aad Kolasinaach, haleellaan isaanirratti xiyyeeffate raawwatuu isaa himuun, osoo hin miidhamiin jalaa ba'uu isaanii Kilabichi mirkaneeffateera.
Viidiyoo warabamee miidiyaa hawwaasummaa irratti gadi dhiifamerraa akka arguun danda'ametti, Kolaasinaach yeroo saamtota kana Daandii Pilaatis Leen, kan 'Golders Green', jedhamutti dhiyoo jirurra naannoo sa'aatii 12 ari'aa jiruu argarsiisa.
Arsenaal ibsa baaseen akka jedhetti: "Taphattoota kunneen lamaan dubbisneerra, isaan lamaanuu nagaa isaaniidha." Boodarammoo Kolaasinaach tiwitara isaa irratti nagaa ta'u isaanii ibseera.
Skip Twitter post by @seadk6
— Sead Kolašinac (@seadk6) 26 Adooleessa 2019
End of Twitter post by @seadk6
Viidiyoo miidiyaa hawwaasummaa irratti waliif qoodamaa jiru sana keessatti taphataan sarara duubaa Kolaasinaach osoo namoota albee/billaa qabatan lama waliin wal haadhu mul'ata.
Taphattoonni lamaanuu yeroo konkolaataa keessaa utaalanii bahuun namoota lama fuula isaanii aguuggiin dhokfatanii gara konkolaataa isaaniitti deeman dura dhaabbachaa jiraniis argameera.
Viidiyoo sana keessa, saamtonni ari'aa turan sun hidhannoo waliin kan argaman yommuu ta'u taphataa umuriin isaa ganna 26 ta'e Kolaasinaachitti yeroo billaa aggaaman agarsiisa.
Dubbi Himaan Poolisii Kan Metiroopoliitaan akka jedhetti: "Shakkamtoonni doqdoqeedhaan fiigaa turan nama konkolaataa oofaa jiru saamuudhaaf yaalaa jiru kan jedhutu gabaafame."
"Konkolaachisaan kun, nama waliin konkolaataa keessa ture, nama hidhannoo hin qabnee yommuu ta'u, gara mana nyaataa 'Golders Green' dhiyoo jirutti baqachuudhaan of baasuu yaaleera. Bakka sanattis poolisiin isaan dubbiseera."
Hanga ammaa namni to'annaa jala oolfame hin jiru.
Kolaasinaachiifi taphataan sarara gidduu Oziil daandii Landan irratti rakkoo akkanaaf yeroo saaxilaman kan duraa miti.
Bara 2016, taphataan sarara fuula duraa kilaba Weest Haam Andii Kaarool yeroo shaakala irra turee gara manaa isaatti deebiyu karaa irraatti qawwee addatti qabun doorsifameera.
Moo Saalah: Taphataa arjaa Masirii guddaa leellifame
Viidiyoo Haleellaa hoteelaa Kismaayyoo lubbuu namoota hedduu galaafateen booda
Hidhattoonni Al Shaabaab haalleellaa Somaaliyaatti taasisaniin Ministira ajjeesan
Haleellaa naannoo Affaariin duuba kan jiru eenyu?
Haleellaa Masjiidota Niiw Ziilaand: Pirezidantiin Tarkii Tayiib Erdohaan viidiyoo haleellaa Niw Ziilaanditti raawwate maaliif agarsiisan?